how to filter unwanted Email - MYSTERY ZILLION
how to filter unwanted Email
August 2014 edited August 2014 in Daily Life
ဟို blog member ဝင် .,ဒီ blog member ဝင်Email တောင်း
ပေးလိုက် အခု တော.
ကိုရဲ. inbox ထဲ မှာ မလိုချင်တဲ. Mail တွေက တန်းဆီ.တစ်နေ.လောက် မဖျက်လိုက်ရင် ရာချီနေ..ဖတ်ချငိတဲ.စာတွေ ကိုကျတော. မနည်းလိုက်ရှာရ
တော်တော် လေးproblem တက်လာလို.
ဘယ်လို လေးစစ်ထုတ်ကလဲ သိချငိလို.ပါ....?
inbox ထဲမှာပါ မရှိစေချင်တာပါ လိို.
what email client are you using ? for gmail , you can use filter.
You can do filter at
ဘယ်လို filter က တာ လဲ....?